Atụkwasịkwala ndị ọzọ obi. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Na ndụ, anyị na-abịa naanị anyị, naanị anyị. Dị ka ndụ si aga, anyị na-eme ọtụtụ mmekọrịta. Imirikiti n'ime ha baara anyị ezigbo uru ma dịrị n'otu wee jisie ike. Ma ekwesighi inwe isi na ndụ, na anyị dabere na mmadụ nke anyị enweghị ike ịdabere na onwe anyị.
Mara mgbe niile, na anyị bụ nkwado anyị kachasị. N'agbanyeghị onye hapụrụ anyị, anyị agaghị enwe mmetụta nke enweghị enyemaka, ọ bụrụ na anyị mee onwe anyị ka anyị nwee ike iche ihe ọ bụla bịara. Iji mezuo nke a, anyị kwesịrị ịzụlite ikike iche echiche.
Anyị kwesịrị inwe ikike iche echiche ọ bụla na-eche ihu ọ bụla. Anyị ekwesịghịkwa inwe ahụ ike ịgafe n'okwu ndị a. N'ihi ya, anyị kwesịrị ịmalite ilekọta onwe anyị. Nke a apụtaghị na ịchọ ọdịmma onwe ya naanị, mana ilekọta onwe onye dị mkpa maka ito nke mmadụ.
Mgbe ị na - atụkwasịkwuru otu onye obi, ị na - eche na onye ahụ ga - elekọta nsogbu gị. Mana n'ihi ihe ọ bụla, onye nke ọzọ, n'agbanyeghị agbanyeghị ya, nwere ike ọ gaghị enwe ike imezu nkwa ha. Ọ bụrụ na anyị akwadoghị ụdị ọnọdụ ahụ, mgbe ahụ ọ ga-esiri anyị ike ịhapụ imeghachi omume, hapụ naanị ime ya.
Ya mere, a na-adụ ya ọdụ mgbe niile ka ịghara ịdabere na ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’anyị chee na anyị enweghị otu aka ọrụ nke na-egbochi anyị ime ihe, mgbe ahụ kama ịnakwere enweghị ụkọ dịka mmeri, anyị kwesịrị ịgbalị ịzụlite nkà ahụ. Nke a ga - enyere anyị aka ịkwalite onwe anyị dịka mmadụ kwadebe anyị ka anyị nwekwuo ntụkwasị obi onwe anyị.
Dabere na Quotes
Obere okwu dị ike
Kwuru okwu dabere
Obere nkenke obi siri ike
Obere mkpirisi mkpirisi okwu maka oru
Nkọwapụta Nkọwapụta Dị Mpempe
Nkọwapụta Mfe Dị Mfe
Obi atula gị ikpe maka imere gị ihe kacha mma. - Amaghi ama
Obi atula gị ikpe maka imere gị ihe kacha mma. - Isi okwu ndi amaghi ama:
Ihe kachasị mma iji zụlite mmekọrịta gị bụ oge, mkparịta ụka, nghọta na ịkwụwa aka ọtọ. - Amaghi ama
Iji mee ka mmekọrịta gị na ya sie ike, ị gaghị achọ onyinye ọ bụla ịhụ ihe onwunwe n'anya. Akụrụngwa agaghị ezuru…
Echekwala onwe gị mgbe ị na-achọ ijide onye na-achọghị ịma gị. - Amaghi ama
Ekwela ka onwe gị nwụọ mgbe ị na-achọ ijide onye na-achọghị ịma gị. - Amaghi ama…
Echefula onye gị na ya nọ mgbe ị na-enweghị ihe ọ bụla. - Amaghi ama
Echefula onye gị na ya nọ mgbe ị na-enweghị ihe ọ bụla. - Isi okwu ndi amaghi ama:
Taa bụ ụbọchị ịtụnanya inwe ụbọchị ihe ịtụnanya. - Amaghi ama
Oge dị oke mkpa na anyị kwesịrị ịghọta uru ọ bara. Ọ na-echere onye ọ bụla na ya mere…